IWebhusayithi yeLifu ye-Elementor: Yakha indawo yakho ye-Elementor ye-WordPress kule ndawo iXhaswe ngokuPheleleyo eZinikezelweyo zokubamba | Martech Zone
IWebhusayithi yeLifu ye-Elementor: Yakha indawo yakho ye-Elementor ye-WordPress kule ndawo iXhaswe ngokuPheleleyo yoNikelo lokusingathwa
NgoMvulo, Matshi 7, 2022 NgoMvulo, Matshi 7, 2022 Douglas Karr
Kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, bendincedisa umxhasi ekuphuculeni iwebhusayithi yakhe eyakhelwe kwiWordPress kunye nokusebenzisa Umakhi we-Elementor… endikholelwa ukuba yeyona ilungileyo onokuyifumana. Idweliswe njengenye yam ezicetyiswayo plugins WordPress.
Ngexesha elithile, i-Elementor Builder yayiyongezelelo olukhulu kuyo nayiphi na umxholo. Ngoku, umakhi uye womelela kangangokuba unokwakha naluphi na uyilo oluvela kumxholo kuba unethala leencwadi elibanzi lephepha kunye noyilo lwamanqaku. Ngaphezulu kwe-+100 yeewijethi ezimangalisayo kunye neetemplate ezingama-300+, unokwenza naluphi na uhlobo lwewebhusayithi onokucinga ngayo. I-Elementor iyahambelana ngokupheleleyo nayo WooCommerce njengokuba.
I-WordPress inokuba ngumzabalazo omkhulu ukulungisa ingxaki kunye nokulungisa xa kukho umba. Ukuba indawo yakho ye-WordPress ineengxaki, umphathi wakho uya kuhlala egxeka umxholo wakho, inkxaso yakho yomxholo iya kuhlala igxeka iiplagi zakho, kwaye inkxaso yakho yeplagin inokugxeka ukusingathwa kwakho ... kunokuthatha umzamo omncinci ukubethelela umthombo womcimbi. kwaye ufumane isisombululo. Ukwenza njalo, kufuneka ube netoni yamava ekuphuhliseni nasekuphumezeni iWordPress… eyoyisa injongo yokusebenzisa ezi zisombululo ziphuma-kwibhokisi.
Kodwa kuthekani ukuba unokudibanisa ukusingathwa, i-backups, umxholo, kunye nenkxaso yeplagin zonke kwisisombululo esinye, esifikelelekayo? Unga…
Ukwazisa i-Elementor Cloud Website
U-Elementor uthathe umtsi omkhulu phambili ngokusungula iqonga lakhe lokubamba, Cloud Elementor.
Ufumana zonke izibonelelo ze-Elementor Pro, ngenkxaso yayo yonke into ukusuka kumhleli ukuya ekusingatheni:
Ixabiso loNyaka yi-99 yeedola ngaphandle kweentlawulo ezifihliweyo
Ukusingathwa okwakhelwe ngaphakathi kwiQonga leLifu likaGoogle
Khusela i-CDN nge-Cloudflare
Isiqinisekiso sasimahla se-SSL nguCloudflare
I-20 GB yokugcina
100K utyelelo lwenyanga
Uqhagamshelo lwe-domain yesiko lwasimahla
I-subdomain yasimahla phantsi kwe-elementor.cloud
Ugcino oluzenzekelayo kanye kwiiyure ezingama-24
Isitshixo sesiza ukugcina i-website yomsebenzi oqhubekayo yabucala
Ugcino lwezandla ukusuka Isiqalelo sam iakhawunti
Yonke into inokulawulwa kwi Isiqalelo sam kwideshibhodi. Kulapho unokufikelela kwideshibhodi yakho ye-WordPress, uqhagamshele i-domain yesiko, usete i-domain yakho ephambili, vula kwaye uvale iSitshixo seSiza, ulawule ii-backups, ubuyisele iwebhusayithi ukuba kuyimfuneko, kunye nazo zonke ezinye iintshukumo eziluncedo.
Elementor Cloud Website lukhetho olukhulu kubadali bewebhu abafuna ukugxila ekudaleni iiwebhusayithi ngokulula, njengoko bafumana isisombululo esineendleko zokuphela kokuphela phantsi kophahla olulodwa. Kwakhona, ilungile kuye nabani na owakha iiwebhusayithi zabathengi, njengoko ivumela inkqubo yonikezelo ethe ngqo kwaye ilula ukugcinwa.
Fumana iWebhsayithi yeLifu
Ukubhengezwa: Singamalungu Mlawuli, Isiqalelo sam, yaye Elementor Cloud Website kwaye basebenzisa ezi kunye namanye amakhonkco adibeneyo kulo lonke eli nqaku.
tags: eyona Wordpress pluginselementorilifu elementorelementor ilifu websiteelementi proiqonga lefu likagoogleisiqalelo samumakhi wephephaSSLwoocommerceWordPressi-wordpress i-backupsyokupasa amagamaitemplate yegamaiiwijethi ze-wordpress
Ukurhwebesha ukuSayina kwe-imeyile, abapapashi kufuneka bangqine ubuchule babo boBuntu ngokuSayina ngokweMixholo.
Kutheni i-Audio ngaphandle kweKhaya (AOOH) inokuNceda ukuKhokela uTshintsho kude neCookies zomntu wesithathu